म शक्तिको दुरुपयोग गर्न सक्दिनँ | MyBhaktapur.COM "The Mirror of Nepal" | News | Promotion | Community | Regional | Entertainment | Events | Information |
Friday, December 9, 2011 4:49 pm, Posted by 0	| Interviews
बिद्यार्थी राजनीतिमा मानुषी यमी भट्टराईको चर्चा चल्न थालेको धेरै भएको छैन। सशस्त्र द्वन्द्वकालमा उनको पढाइ-लेखाइका बारेमा चर्चा सुनिन्थ्यो। पाँच वर्षअघि भारतबाट स्थायी रूपमा नेपाल फर्किएर त्रिभुवन विश्वविद्याल्ाय केन्द्रीय क्याम्पस, कीर्तिपुरमा अध्ययन र राजनीतिलाई सँगै अघि बढाउँदै छिन् मानुषी। स्ववियु निर्वाचनका क्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उनले सर्वाधिक मत ल्याएपछि विद्यार्थीहरूमाझ उनको लोकपि्रयता प्रमाणित भयो। गत शुक्रबार मानुषी सामान्य पहिरनमा भेटिइन्। सामान्य चप्पलमा झोला भिरेकी मानुषीले बालुवाटारको एक क्याफेमा साप्ताहिकका नरेन्द्र रौले र शिव मुखिया सँग विद्यार्थी राजनीति, युवा एवं समसामयिक सन्दर्भमा लामो कुराकानी गरिन् ः
प्रधानमन्त्रीकी छोरी, पहुँचवाला मान्नुहुन्न ? पटक्कै लाग्दैन। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई त कहिलेकाहीं 'म प्रधानमन्त्री हो र ?' भनेजस्तो लाग्छ रे। मेरो के कुरा..? म त अरूजस्तै सामान्य नागरिक हुँ।
शैक्षिक समस्यामा त सहयोग गर्छांै नै। हाम्रो काम नै उनीहरूको समस्या समाधानमा सहयोग गर्ने हो। यद्यपि व्यक्तिगत सहयोगका लागि पनि अनगिन्ती मानिस आउँछन्। केही यति धेरै समस्यामा हुन्छन् कि उनीहरूलाई सहयोग गर्न नसक्दा आफैं लाचार भएजस्तो लाग्छ। तपाईं बुबाआमाकै आडमा राजनीतिमा लागेको हो ?
मैले बुझेसम्म धेरै साथीले मेरो सरलतालाई मन पराएर मत दिनुभयो। राजनीति गर्नेहरूका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय राम्रो प्लेटर्फम हो। तपाईंको त्रिभुवन विश्वविद्यालय भर्ना हुने उद्देश्य पनि त्यही होइन ?
एउटा पक्ष त्यो पनि हो तर राजनीतिकै लागि मात्र होइन। म स्नातकोत्तर अध्ययनका लागि यहाँ भर्ना भएकी हुँ। किनभने नेताका छोराछोरीले सरकारी स्कुल पढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको सिद्धान्त नै छ। यहिबाटै मैले राजनीतिशास्त्रमा एमए सकेँ। अहिले इतिहासमा थेसिस गर्दैछु। तर तपाईंले यसअघिको पढाइ त बेलायत, भारत आदिका महँगा विद्यालयमा गरेको चर्चा छ नि ?
मैले धेरैवटा स्कुल फेरंे। त्यो मेरो बाध्यता थियो। कक्षा पाँचसम्म यहीं -काठमाडौं) कै विभिन्न स्कुलमा पढें। त्यसपछि भारत पश्चिम बंगालको पेदोङमा पढ्न गएँ। त्यहाँ पनि मैले गरिबहरू पढ्ने सेन्ट जोर्जेट स्कुलमै पढें। नैनीतालमा पढें। पछि दिल्लीको एनडिएमसी स्कुलबाट १२ कक्षा सिध्याएँ। म दिल्लीकै लेडी श्रीराम कलेजबाट ब्याचलर गरेर मास्टर्सका लागि बेलायत गएकी हुँ। ती सबै स्कुलमा मैले न्यूनतम शुल्क तिरेर पढेकी हँु। यसरी स्कुल फेरिरहनुपर्ने कारण ?
सुरक्षाले गर्दा। भारतमा पढ्नुको कारण यही मात्र हो। सुरक्षाका लागि मैले अस्मिता सिंह भन्ने छद्म नाम प्रयोग गर्नुपर्‍यो। मेरो शैक्षिक प्रमाणपत्रमा त्यही नाम छ। नागरिकतामा चाहिं दुवै नाम छ। द्वन्द्वकालमा थुपै्र पटक शैक्षिक हड्ताल भए, विद्यालयहरू युद्धमैदानमा परिणत भए। त्यसबाट लाखौं नेपालीका छोराछोरी नराम्रोसँग प्रभावित भए, तर तपाईंले त त्यस्तो भोग्नुपरेन नि ?
पीडा त हुन्थ्यो तर हाम्रो लक्ष्य पूरै व्यवस्था बदल्ने भएकाले त्यसमा अल्भिmने कुरा पनि थिएन। हामी आमूल परिवर्तनका लागि हिँडेका थियौं। पुरानो शैक्षिक व्यवस्था बदल्न हिँडेका थियौं। तपाईं पनि युद्धमा हिँड्नुभयो ?
म यहाँ -नेपालमा) को युद्ध मोर्चामा थिइनँ। भारतको फरिदावादमा नेपाली श्रमिकहरूसँग मिलेर काम गर्दै थिएँ, श्रमिकहरूको हक, हितका लागि। साथै, द वर्कर भन्ने पत्रिकाका निम्ति सहयोग गरिरहेकी थिएँ। अघि तपाईंले शैक्षिक व्यवस्था बदल्न हिँडेका थियौं भन्नुभयो, बदल्नु भयो त ?
हामी शैक्षिक सुधारकै लागि राजनीति गरिरहेका छौं। एउटा प्रणाली बसाउन लडिरहेका छौं। उक्त प्रणाली स्तापित भएपछि शिक्षा क्षेत्रमा स्वतः सुधार हुँदै जानेछ। हामीकहाँ आन्दोलनको नाममा ढुंगामुढा, तोडफोड मात्र हुने गरेको छ, त्यसलाई रचनात्मक बनाउन सकिँदैन ?
विद्यार्थी आन्दोलन सेलाएको होइन, अलि कम प्रतिक्रियात्मक मात्र भएको हो। शान्ति र संविधान मूल एजेन्डा भएकाले सबैको ध्यान त्यता के न्दि्रत छ। त्यसो त हामी विद्यार्थी हक-हितका लागि निरन्तर लडिरहेका छौं। हामीले विद्यार्थीलाई सहुलियतको मुद्दा उठायौं, गाडीभाडाको मूल्यव ृद्धिको विरोध गर्‍यौं। हाम्रै दबाबका कारण त्रिभुवन विश्वविद्यालयले शैक्षिक क्यालेन्डर निकाल्यो। राजनीति गर्ने सीमित युवाहरूलाई छाड्ने हो भने अधिकांशमा पोलिटिकल ह्यारेसमेन्ट बढ्दो छ नि ?
राजनीतिलाई फोहोरी खेल बनाइएकाले त्यस्तो भएको हुनुपर्छ। अब, हामीले यसलाई नयाँ परिभाषा दिनुपर्छ। कस्तो नयाँ परिभाषा ?
माओवाद वैज्ञानिक र व्यावहारिक छ भनेर हामी लागिपरेका हांै। यो हाम्रो जाति, लिंग, क्षेत्र तथा भूगोलका लागि पनि उपयोगी छ, अर्थात् ने पाली माटोमा सुहाउँदो छ। हामी विश्वस्त भएरै यसमा लागेको हो। वर्गीय शोषणलाई केन्द्रमा राखेर हामीले सबै पक्षलाई उठायौं र छोटो समयमै सफल पनि भयौं। माओवादका सम्बन्धमा तपाईंको अध्ययन ?
छैन, म निरन्तर समाजसेवामा समर्पित हुन चाहन्छु। युवाहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
Comment	You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> ← Nepal’s PLA: from guerillas to motherhood
यसकारण आउँदैछन् चिनियाँ प्रधानमन्त्री नेपालको भ्रमणमा →